Tsena iraisam-pirenena : mety hidina ny vidin-tsolika | NewsMada
Tsena iraisam-pirenena : mety hidina ny vidin-tsolika
Efa mihatra eto Madagasikara ny fiovaovan’ny vidin-tsolika eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Iray volana aorian’ny famandrihana ny ahatongavan’ny solika eto amintsika. Koa raha jerena ny vidiny tamin’ny volana jolay, nanodidina ny 49,35 dolara ny vidin’ny iray barila. Efa tafidina hatrany amin’ny 39,8 dolara izany ny 10 aogositra teo, saingy niakatra ho 48,26 dolara indray, raha ny omaly 19 aogositra.
Araka ireo fiovaovana ireo, tokony hidina ny vidin-tsolika amin’ny faran’ny volana aogositra izao na ny fiandohan’ny volana septambra. Nahazo aina kely koa ny sandambola Ariary miohatra amin’ny dolara, vola fividianana solika eo amin’ny tsena. Raha nisanda 3.213 Ar ny 1 dolara ny fiandohan’ny volana jolay, nihena 3.025 Ar izany ny 19 jolay ary 3.042 Ar ny 19 aogositra teo.
Mitantana sy manapaka ny vidiny eto Madagasikara ny Ofisy malagasy mitantana ny vokatra ara-tsolika (OMH). Azo antoka fa eo am-pandinihana izany ity rafitra ity sady eo koa ny tahotra amin’ny fandrahonana ataon’ny mpitatitra taxi-be (UCTU) hampiakatra ny saran-dalana ho 500 Ar amin’ny 26 aogositra ho avy izao.